CAB Ithuluzi Lokulungisa. Lungisa Konakele CAB Amafayela.
DataNumen CAB Repair iyona best CAB ithuluzi lokutakula emhlabeni. Ingalungisa abonakele CAB izingobo zomlando bese uthola idatha yakho eningi ngangokunokwenzeka, ngaleyo ndlela unciphise ukulahleka kokonakala kwefayela.
4.90 / 5 (kusuka kumavoti angu-1,646)
Kungani DataNumen CAB Repair?
Ngiyaphinda futhi, ngiyabonga nge-
Izici eziyinhloko ku DataNumen CAB Repair v2.4
Ukusekela ukulungisa yonke inguqulo ye-Microsoft cabamafayela we-inet.
Ukusekela ukulungisa CAB amafayela acindezelwe nge-MSZIP, Izindlela ze-LZX ne-Quantum.
Ukusekela ukulungisa CAB amafayela kwimidiya eyonakele, njengamadiski e-floppy, Zip amadiski, ama-CDROM, njll.
Ukusekela ukulungisa iqoqo le- CAB amafayela.
Nikeza isiteki se-EXE bese ukhipha ifayela le-SFX lapho kudingeka.
Ukusekela ukuthola nokukhetha ifayela le- CAB amafayela azolungiswa kukhompyutha yekhasimende.
Ukusebenzisa DataNumen CAB Repair Ukubuyisela i-MS Elimele CabIngobo yomlando
Lapho iMicrosoft yakho cabizinqolobane ze-inet (.CAB amafayela) alimele noma akhohlakele futhi awukwazi ukuwavula ngokujwayelekile, ungasebenzisa DataNumen CAB Repair ukuskena.CAB amafayela bese uthola idatha kusuka kumafayela ngangokunokwenzeka.
Qaphela: Ngaphambi kokuthola noma yikuphi okonakele noma okonakele CAB amafayela nge DataNumen CAB Repair, sicela uvale noma yiziphi ezinye izinhlelo zokusebenza ezingashintsha i CAB Ifayela.
Khetha okonakele noma okonakele CAB ifayela elizolungiswa:
Ungafaka i CAB igama lefayela ngqo noma chofoza ukuphequlula bese ukhetha ifayela. Ungase futhi uchofoze ifayela le- ukuthola inkinobho CAB ingobo yomlando ezolungiswa kukhompyutha yendawo.
Ngephutha, DataNumen CAB Repair izogcina okungaguquki CAB fayela kufayela elisha elibizwa nge-xxxx_fixed.cab, lapho i-xxxx igama lomthombo CAB ifayela. Isibonelo, komthombo CAB ifayela Lonakele.cab , igama elizenzakalelayo lefayela elihleliwe lizolimala_fixed.cab. Uma ufuna ukusebenzisa elinye igama, sicela ukhethe noma usethe ngokufanele:
Chofoza inkinobho, futhi DataNumen CAB Repair intando start ukuskena nokulungisa umthombo CAB ifayela. Ibha yenqubekela phambili
Ngemuva kwenqubo yokulungisa, uma ngabe umthombo CAB ifayela lingalungiswa ngempumelelo, uzobona ibhokisi lomlayezo kanjena:
Manje usungavula i-fix CAB ifayela nge-WinZip, PhumelelaRAR noma ezinye izinhlelo zokusebenza ezisekelayo CAB amafayela.
DataNumen CAB Repair 2.4 ikhishwa ngoDisemba 21, 2020
DataNumen CAB Repair 2.2 ikhishwa ngoNovemba 5, 2020
DataNumen CAB Repair 2.1 ikhishwa ngoJanuwari 23, 2019
Ukusekela iWindows 8.1 no-10.
DataNumen CAB Repair 2.0 ikhishwa ngoNovemba 9, 2013